Ka anyị zute Synaptic na LMDE <° Linux | Site na Linux
Otu n'ime ajụjụ ndị a na - ajụkarị n’etiti ndị ọrụ malitere GNU / Linux, bụ otu esi etinye ma ọ bụ wepu mmemme na ụdị nchịkọta enwere ike ịwụnye. Anyị ga-egosi gị otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji rụọ ọrụ a, na-eji Synaptic, na kwa, anyị ga-agwa gị nkenke ihe ọ bụ na otu anyị nwere ike isi jiri ya.
Nọmalị na Windows, iji wụnye usoro ihe omume faịlụ na ndọtị .exe na anyi kwesiri iji ya Na-esote »Ọzọ na otu ma ọ bụ ọzọ Oghere Usoro ọgụgụ na agbara usoro (iwepụ), anyị na-aga Ogwe njikwa »Tinye / Wepu Mmemme.
N'ihe banyere GNU / Linux, enwerekwa ihe anyi puru ikpo nke anyi .exe mana n'ezie, ha nwere aha na nhazi ọzọ. Na-emekarị ọtụtụ n'ime nchịkọta GNU / Linux E debere ha n’ebe a na-edebe ego, a na-ejikwa ihe dị iche iche na-elekọta ha. Ikekwe ndị kasị ewu ewu ma ọ bụ ndị a ma ama bụ .deb na .rpm ma ha nwere ike ijikwa ya Synaptic, nke bu ụzọ interface maka APT.
Soro ya rụọ ọrụ Synaptic ọ dị mfe. The interface adịghị mgbagwoju anya na adịkarịghị ka a ọhụrụ ọrụ nwere iji ma ọ bụ gbanwee ya niile nhọrọ. Ke ofụri ofụri, dị ka ọ na-abịa na ndabara, ndị kasị nkịtị ihe aga-eme nwere ike rụrụ.
Synaptic adịwo ka ya Tinye / Wepu Mmemme de Windows. Maka ọrụ ya, anyị agharịrị ịhazi (n'ihe banyere Debian na ihe eji eme ya) uzo ndi a na-edebe ebe a na-etinye ngwugwu iji tinye, na faịlụ /etc/apt/sources.list. Site na faịlụ ahụ, Synaptic na-enweta ụzọ achọrọ iji nweta nchịkọta.
1 Mara interface.
2 Nhọrọ ndi ozo.
3 Ọbụna karịa?
Ọ dị mma ịgbakwunye na interface nke Synaptic en LinuxMint, dị iche na Debian. Maka ụfọdụ ihe kpatara ya LinuxMintbọtịnụ esonyeghi Lelee mmelite niile. Ma ka anyị laghachi na interface.
N'elu anyi nwere Ogwe nhọrọ nke anyị ga-ahụ ụfọdụ nhọrọ ma emechaa. A obere n'ihu ala, ndị na-esonụ buttons:
Mbupu: Melite ndepụta ngwugwu.
Tinye: Mgbe anyị kaa akara ngwugwu iji wụnye ma ọ bụ wepu ya, anyị na-eji bọtịnụ a iji tinye mgbanwe ahụ.
Njirimara: Ọ na-egosi njirimara nke ngwugwu ahụ, nkọwa ya na ịdabere na ya.
Chọọ: Ọ na-egosipụta a dialog na ọtụtụ nhọrọ ịchọ nchịkọta dị ka ụfọdụ parameters.
N'okpuru ebe anyị nwere interface ekewapụrụ na ogidi abụọ. N'aka ekpe bụ nhọrọ dịka akụkụ anyị họọrọ. Kpọọ ngalaba bọtịnụ: Ngalaba, Ọnọdụ, Mbido, Nzacha na nsonaazụ ọchụchọ.
Ngalaba: Egosi nchịkọta haziri site na edemede. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọ ngwugwu metụtara ya Gnome Desktop Gburugburu, dịka ọmụmaatụ, anyị ga-aga ngalaba Gnome.
State: N'akụkụ a, anyị ga-ahụ nke ngwugwu ndị a na-akwalite, na-adịkwaghị aga, arụnyere ma ọ bụ nnabata.
Amalite: Na-egosi mmalite (repositories) nke nchịkọta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ebe ha si bia.
Nzacha: N'akụkụ a ị nwere ike itinye ụfọdụ nzacha iji nweta ụdị ozi dị iche iche. Ọ dị mkpa ịmara na nchịkọta ndị agbajiri na-apụta ebe a.
Chọọ rịzọlt: Kpamkpam ihe ọ na-eme dị ka aha ya na-egosi, na-egosi nsonaazụ ọchụchọ na Synaptic.
N'akụkụ nke ọzọ anyị nwere ndepụta nchịkọta anyị nwere ike iwunye site na Synaptic. Ọ bụrụ na anyị họrọ nke ọ bụla n’ime ha wee pịa aka nri, anyị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ụfọdụ dịka:
Uncheck: Uncheck ngwugwu ma ọ bụrụ na anyị ahọrọla ya na mbụ.
Lelee iji wụnye: Lelee ngwugwu iji wụnye.
Akara ịtọgharịa: Ọfọn, họrọ ma wụnye ngwugwu ahụ ọzọ.
Akara iji melite: Ọ bụrụ na ngwugwu nwere mmelite, anyị na-ahọrọ ya na nhọrọ a.
Kaa ka ihichapụ: Hichapụ naanị ahọrọ ngwugwu.
Lelee iji wepu kpamkpam: Wepu ngwugwu ahọrọ na ndị a tụrụ aro ya. Ihe ndị a tụrụ aro na-aga nhazi nhazi.
Propiedades: Na-eme otu ihe ahụ bọtịnụ dị n'elu.
Akwadoro maka ntinye: Họrọ ndị a tụrụ aro dabere na ngwugwu iji wụnye.
Akara aro maka ntinyeHọrọ ihe ndabere a tụrụ aro nke ngwugwu iji wụnye.
Nhọrọ ndi ozo.
Mara nke a anyị nwere ike ị rụọ ọrụ na ya Synaptic, ma anyị nwere ike ime ihe ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ ịgbanwe isi mmalite nke nchekwa. Ihe bara uru ma ọ bụrụ na enyo ndị anyị na-eji nwayọ ma ọ bụ ala. Maka nke a anyị ga-eme Nhazi »Repository.
Na windo nhọrọ anyị nwetara, naanị anyị kwesịrị ịmara taabụ 3 iji nwee ike ijikwa ebe nchekwa anyị. Na nke mbụ, anyị na-enweta alaka ndị anyị ji arụ ọrụ LinuxMint (Isi, Elu, Mbubata, Mbubata na Romeo). Naanị ịlele / unchecking dezie faịlụ ahụ /etc/apt/sources.list.
Na taabụ nke abụọ anyị gụnyere nchekwa ndị na-abụghị Mint, nke ahụ bụ, na Nchịkọta nke atọ dịka nke Debiannke PPA de Ubuntu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dakọtara na LMDE.
Na taabụ nke atọ, anyị nwere ike ịgbalite mmelite akpaka na oge ọ bụla anyị chọrọ ka ha gbaa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, Synaptic kwesịkwara ịtọ Proxy netwọk na Nkesa na anyị chọrọ iji na ndabara. Maka nke a anyị ga-eme Ntọala »Mmasị.
Iji kọwaa ntakịrị ihe banyere Nkesa, ọ bụrụ na anyị eleba anya na faịlụ ahụ /etc/apt/sources.list, anyị nwere nhazi abụọ iji mee (rịba ama ederede nwere agba):
http://gwọ http://packages.linuxmint.com/ debian isi upstream ibubata
ụgwọ http://ftp.debian.org/debian testing isi na-enye onyinye na-abụghị n'efu
http://gwọ http://security.debian.org/ testing/ mmelite na-enye aka na-abụghị n'efu
http://gwọ http://www.debian-multimedia.org testing isi na-abụghị n'efu
Ndabere, Synaptic na-ewe nkesa kachasị elu mgbe niile, nke pụtara na ọ bụrụ na ngwugwu abanye Akwukwo 2.8 na nkwụghachi nke Mint (debian) na mbipute 2.9 na Asụsụ Debiantesting), usoro ihe omume ga-atụ aro iji wụnye mbipute 2.9.
N'ezie, enwere ike gbanwee nke a ma ọ bụrụ na anyị jiri aka anyị họrọ nkesa anyị chọrọ iji iji nhọrọ ahụ: Na-ahọrọ nsụgharị nke:
Ma ọfụma, ọ bụrụ na anyị ejiri zighachi akwụkwọ nnọchite iji jikọọ site na http, anyị nwekwara nhọrọ ịtọ ya aka:
Enwere ngwaọrụ ndị ọzọ iji jikwaa ngwugwu anyị, melite ma wụnye ha. Ubuntu ihe atụ ugbu a na-agụnye gị Lọ Ọrụ Ngwanrọma LMDE nwere nnọọ yiri nke ahụ, mana ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ Synaptic O zuru ezu karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ka anyị zute Synaptic na LMDE
Ana m ekele gị nke ukwuu, eziokwu bụ na m na-amalite na Linux ma ngwá ọrụ a dị mkpa. Ọ dị mma ịmara ya nke ọma
Achọrọ m ịma otu esi egbochi Linux mint 17 Quiana site na ịnwa imelite repo site na saịtị ọrụ ya
Ma tinye n'ime isi mmalite m. Depụta adreesị mmelite ọhụụ anwalela na Ubuntu 14.04 ma dakọtara na Mint mana mgbe (apt-get update) ihe ndị a gosiri:
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu Atukwasiri obi na atukwasiri obi
Njehie http://packages.linuxmint.com qiana InMepu
Njehie http://archive.ubuntu.com ntụkwasị obi InRelease
Njehie http://archive.ubuntu.com ntụkwasị obi-mmelite InRelease
Njehie http://security.ubuntu.com ntụkwasị obi-nche InRelease
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu ntụkwasị obi-nche InRelease
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu ntụkwasị obi-mmelite InRelease
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu ntụkwasị obi InRelease
Njehie http://archive.ubuntu.com ntụkwasị obi Hapụ.gpg
Enweghi ike idozi "archive.ubuntu.com"
Njehie http://security.ubuntu.com ntụkwasị obi nche hapụ.gpg
Enweghi ike idozi "security.ubuntu.com"
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu Hapụ ntukwasiobi.gpg
Enweghi ike idozi "ubuntu.mes.edu.cu"
Njehie http://packages.linuxmint.com Qiana Hapu.gpg
Enweghi ike idozi "packages.linuxmint.com"
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu ntụkwasị obi nche hapụ.gpg
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu ntụkwasị obi-mmelite Release.gpg
Njehie http://archive.ubuntu.com ntụkwasị obi-mmelite Release.gpg
Njehie http://ubuntu.mes.edu.cu ntụkwasị obi Hapụ.gpg
Njehie http://extra.linuxmint.com qiana InMepu
Njehie http://extra.linuxmint.com Qiana Hapu.gpg
Enweghi ike idozi "extra.linuxmint.com"
Njehie http://archive.canonical.com ntụkwasị obi InRelease
Njehie http://archive.canonical.com ntụkwasị obi Hapụ.gpg
Enweghi ike idozi "archive.canonical.com"
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-proposed/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-proposed/Release.gpg Enweghi ike idozi "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Enweghị ike inweta http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg Enweghi ike idozi "packages.linuxmint.com"
W: Enweghị ike inweta http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg Enweghi ike idozi "archive.ubuntu.com"
W: Enweghị ike inweta http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg Enweghi ike idozi "archive.ubuntu.com"
W: Enweghị ike inweta http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg Enweghi ike idozi "security.ubuntu.com"
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg Enweghi ike idozi "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg Enweghi ike idozi "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Enweghị ike inweta http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg Enweghi ike idozi "ubuntu.mes.edu.cu"
W: Enweghị ike inweta http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg Enweghi ike idozi "extra.linuxmint.com"
W: Enweghị ike inweta http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg Enweghi ike idozi "archive.canonical.com"
W: indexfọdụ faịlụ ndenye dara ibudata. Elegharawo ha anya, ma ọ bụ jiri nke ochie eme ihe.
E: Enweghị ike ịgbachi / var / lib / dpkg / mkpọchi - mepee (11: Ngalaba anaghị adị adị)
E: Nchịkọta nchịkwa (/ var / lib / dpkg /) enweghị ike ịgbachi, ma eleghị anya ụfọdụ usoro ndị ọzọ na-eji ya?
*************** Olee otu idozi nsogbu a? **************************
Ana m arịọ gị ka ị nyere m aka biko
Mgbanwe na Blogger na Picasa